पश्चात्तापको श्रृंखलामा रूमल्लिएको प्रचण्डको राजनीतिक जीवन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पश्चात्तापको श्रृंखलामा रूमल्लिएको प्रचण्डको राजनीतिक जीवन
२०७० पुष ३, बुधबार ०३:४३ गते
“तिमी त्यो काम नगर, जसबाट पश्चात्ताप गर्न परोस्”, गौतम बुद्धको यो भनाइ मानिसको व्यावहारिक जीवनमा आज पनि त्यत्तिकै मह¤वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । काम गर्दै जाने, गल्ती गर्दै जाने र पछि पश्चात्ताप मान्दै जाने हो भने त्यसले व्यक्तिको जीवनलाई खासै गति दिन सक्दैन । पश्चात्ताप भन्ने विषय व्यक्तिको जीवनमा मात्र होइन, राजनीतिक दलको क्रियाकलापहरुमा पनि जोडिन आउ“छ । पश्चात्तापबाट आत्तिनेभन्दा पनि यसबाट मह¤वपूर्ण शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ, जुन गल्ती फेरि नदोहोरियोस् भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ । नेपालको राजनीतिमा पनि पश्चात्तापको चर्चा यदाकदा हुने गर्दछ । गल्ती त धेरै दलहरुले गर्छन्, तर सार्वजनिक रुपमा भने धेरै कमहरुले मात्र पश्चात्ताप गर्छन् ।
दस वर्षे लामो विद्रोहबाट खुला राजनीतिमा आएपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक जीवन र भूमिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने उनले गरेका कतिपय निर्णयहरु गलत साबित हु“दै पश्चात्तापमा रुपान्तरित हुने गरेका छन् । काम गर्ने र पछुताउने प्रवृत्तिले गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै कमजोर बनाउ“दै लगेको छ । भर्खर बृहद् शान्ति सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आउ“दा प्रचण्डमा जे–जस्तो शान, ओज र प्रतिष्ठा थियो, अहिले पार्टीले दोस्रो संविधानसभामा भोगेको पराजयस“गै उनको राजनीतिक प्रतिष्ठामा गिरावट आएको छ । निर्वाचनमा पराजयपछि उनले सार्वजनिक रुपमा धेरै पश्चात्तापहरु गरेका छन् । हेटौँडाको महाधिवेशनपछि आफैँले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारलाई अहिले प्रचण्डले पार्टीले गरेको ठूलो भूल भनेर पश्चात्ताप गरेका छन्, त्यसैगरी एमाओवादीभित्र पार्टी फुटेको बेला निर्वाचनमा होमिने निर्णय नै गलत भनेर पनि विश्लेषण हुँदै आएको छ । बाहिर निर्वाचनमा धा“धली गरेर हराइएको भन्ने विश्लेषण आए पनि एमाओवादीभित्र भने हार्नुमा पार्टीका आन्तरिक कमीकमजोरीलाई दोष दिइएको छ । पार्टीले गरेका कयौँ गल्ती, कमजोरीलाई समीक्षा गरेर फेरि यस्ता कमजोरीहरु दोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा पार्टीको भविष्य झनै अन्यौलग्रस्त बन्न पुग्नेछ ।
प्रचण्ड मात्र नभएर एमाओवादीका अन्य शीर्षस्थ नेताहरुका फेसबुक पेजहरु पनि पश्चात्तापले भरिने गरेका छन् । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो फेसबुक स्टाटस्मा आफूस“ग जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यसलाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै दुःख मनाउ गरेका छन् । त्यसैगरी, उनले संकटकाल लगाएर पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न नसकेकोमा पनि पश्चात्ताप गरेका छन् । अवश्य पनि एमाओवादीले पहिलो संविधानसभाबाट पाएको जनअभिमतको सम्मान गर्न सकेन । कतिपय जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा लचक भएर पनि संविधान जारी गर्नेतर्फ एमाओवादी अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, पार्टीले त्यस्तो उदारता देखाउन सकेन । उल्टै एमाओवादीले क–कसको नाममा अन्य दलका जनजाति नेताहरुलाई उचालेर अन्य दलहरु कमजोर बनाई आफू शक्तिशाली बन्ने सपना देख्यो । एमाओवादीमा युद्ध उन्माद चर्काे रुपमा देखियो, उसले अन्य दलहरु कांग्रेस र एमालेलाई पार्टी नै गन्न छोड्यो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअगाडिसम्म एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरेका थिए । आचारसंहिता उल्लंघनमा अन्य दलको भन्दा उनकै नाम बढी अगाडि आयो, उनले दिनमा लाखौँ खर्च गरेर कयौँ ठाउ“का चुनावी सभाहरुलाई सम्बोधन गर्न पुगे । गरिब र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिए पनि प्रचण्डको जीवनशैली र बानी–व्यवहारले उल्टै आफ्नै कम्युनिस्ट दर्शनको खिल्ली उडाउने गरेको थियो । एमाओवादीमा अन्य दलहरुको तुलनामा नेतृत्व बलियो देखियो तर तल्लो तहमा पार्टी संगठन निकै कमजोर थियो, जसकै कारणले एमाओवादी निर्वाचनमा पराजित हुन पुग्यो । युद्धकालको जस्तो पार्टी संरचनाले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा काम गर्न सकेन । केन्द्रमा विगत दुई दशकदेखि प्रचण्डले नै पार्टीको कमान्ड सम्हालेका थिए भने तल्लो तहहरुमा पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक ढंगबाट निर्वाचन र अधिवेशनहरु भएर पार्टी संगठनको निर्माण हुन सकेको थिएन । पार्टी इन्चार्जको आदेशमा चल्ने पुरानै पद्धति र शैलीबाट सञ्चालित थियो । भोलिको दिनमा पनि पार्टीले स्थानीय संगठन निर्माणमा ध्यान नदिने हो भने पार्टीमा भएका समर्थक तथा कार्यकर्ताहरु पनि लाखापाखा लाग्न सक्छन् ।
अर्काेतर्फ, पार्टीको फूटले गर्दा पनि एमाओवादीले निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम भोग्न पुग्यो । पार्टी फुट्नुमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै कमीकमजोरीहरु देखिन्छन् । पार्टीभित्र सरकारमा जाने होड र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई सधैँ आफ्नो एकलौटी संगठनजस्तो बनाएकै कारण वैद्य समूह अलग हुन पुग्यो । अझैसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यक परे अध्यक्ष पद त्याग गरेर नै भए पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेका छैनन्, जुन विषय भविष्यमा प्रचण्डको जीवनमा अर्काे पश्चात्तापको श्रृंखला भएर थपिने छ । अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको प्रवेशको प्रक्रियादेखि नै विभिन्न पश्चात्तापहरु भएको तथ्यलाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उनले सुरूमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा पश्चात्ताप गरे । एमाओवादीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरित गर्नुमा उनको मह¤वपूर्ण योगदान थियो ।
यदि समयअनुसार कांग्रेसले गणतन्त्रको एजेन्डा अगाडि नबढाएको भए देश झनै द्वन्द्वमा फस्न सक्थ्यो । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दरबारिया शक्तिलाई कमजोर बनाउ“दै बिनारक्तपात देशमा गणतन्त्र ल्याउन सफल भए । प्रचण्डको आफैँ शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने चाहनाले गर्दा अन्ततः उनको चाहना चाहनामै सीमित हुन पुग्यो । संविधानसभापछि सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले शासनसत्ता चलाउ“दा अपनाउनु पर्ने संयमता देखाउन सकेनन् । विद्रोहकालको रिसलाई पोखेर नेपाली सेनामाथि जाइलाग्न पुगे, जसका कारण रूक्माङ्गत कटुवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोज्दा उनले आफैँ सरकारबाट हट्न पुगे । फेरि पछि राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध आवेगमा आएर सडकमा पुगे, जुन आन्दोलन स्वतः निस्तेज हुन पुग्यो । उनले संयम र सबै पक्षलाई मिलाएर सरकार चलाउन सकेको भए पहिलो संविधानसभा सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेलमा फस्ने थिएन । पछि पनि एमाओवादीका हरेक क्रियाकलापहरु सत्तामा जाने खेलबाटै निर्देशित हुन पुग्यो । ठूलो पार्टीको हैसियतमा जे–जसरी परिपक्वता र लचकता देखाउनु पर्ने थियो, त्यो देखाउन सकेनन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अध्यक्ष प्रचण्डको परिवार–मोह पनि त्यत्तिकै देखियो । उनकी छोरी, बुहारी सबै जना निर्वाचनमा उम्मेदवार बने भने विवादास्पद छविका छोरालाई बोकेर प्रचण्ड चुनावी सभाहरुमा हिँडिरहे । फेसबुकका स्ट्याटस्हरुमा पूर्वयुवराज पारसस“ग प्रकाशलाई तुलना गरेर टीकाटिप्पणीहरु हुने गर्दथे । जसरी एमाओवादीका नेताहरु ज्यानको बाजी लगाएर नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्दै अगाडि आए, सत्तामा पुगेपछि त्यस प्रकारको त्याग र निष्ठामा भने कमी रह्यो । केही सीमित व्यक्तिहरु र आसेपासेहरुलाई विभिन्न राजनीतिक पदहरुमा नियुक्ति गर्ने, आर्थिक फाइदाको हिसाबले मात्र काम गर्ने प्रचलन पार्टीभित्र मौलायो, जसले गर्दा सर्वसाधारण कार्यकर्ताहरुको नजरमा पार्टीको छवि गिर्न पुग्यो । पहु“च हुने एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टीको शक्तिबाट निकै फाइदा लिए र बोल्न नसक्ने कार्यकर्ताहरुको अवस्था झनै बेसहारा बन्न पुग्यो ।
आजसम्म बेपत्ता, युद्धबाट पीडितहरुले न्याय र राहत पाउन सकेका छैनन् । खुला राजनीतिमा आएपछि पार्टीका कार्यकर्ताहरु चन्दा असुली, धम्की र मुढे बलकै राजनीतिमा लागिरहँदा पार्टीको छवि गिर्न पुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि पनि मतगणनास्थलबाट मध्यरातमा भागेर एमाओवादीले अर्काे ठूलो गल्ती ग¥यो । आवेशमा आएर नया“ संविधानसभामा नजानेसम्मको धम्की दिन थाल्यो, जुन धम्की धेरै समय टिक्न सकेन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझमा लाचार भएपछि निर्वाचनको धा“धली छानबिनको नाटक बुन्दै अन्ततः एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ । निर्वाचनमा समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद थप्न माग गरिएको पत्रमा प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर भएपछि त्यस्तो संकेत पाइएको हो । अबको संविधानसभामा एमाओवादीले खेल्ने भूमिकाले नै प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यलाई निर्देशित गर्नेछ । वैद्य पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनमा पनि प्रचण्डकै सहयोगको जरूरी हुनेछ । एमाले र कांग्रेसलाई कसरी हुन्छ, असफल बनाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा मात्र अध्यक्ष प्रचण्ड संसद्मा उपस्थित भए भने जुन प्रवृत्तिले भविष्यमा उनको राजनीतिक जीवनलाई झनै अप्ठ्यारो पार्नेछ ।
प्रचण्डको सक्रिय राजनीतिक जीवनले झन्डै पा“च दशक पार गरिसकेको देखिन्छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा कयौँ शीर्षस्थ नेताहरु जेलमा रहँदा वि.सं. २०२८ सालमा तत्कालीन पुष्पलाल समूहबाट प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा सुरू भएको थियो । उनलाई राजनीतिमा ल्याउनमा भक्तबहादुर श्रेष्ठको ठूलो योगदान थियो । उनी पुष्पलाल समूहको महामन्त्री हुँदा प्रचण्ड क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य थिए । वि.सं. २०३९ सालमा मोहनविक्रम र निर्मल लामाबीचको विवाद देखिएपछि प्रचण्ड मोहनविक्रमतिर लागे । अन्ततः मोहनविक्रम नै उनको विरूद्ध केन्द्रीय समितिमा उत्रिएपछि प्रचण्डले बाध्य भएर विद्रोहको लाइनलाई समाते । तत्कालीन समयमा नेकपा मशालको महामन्त्री वैद्य भएका थिए, पछि उनले राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड महामन्त्री बने । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि चार कम्युनिस्ट पार्टीहरु मशाल, चौँथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको एकता केन्द्रको महामन्त्रीसमेत प्रचण्ड बने । वि.सं. २०५१ सालमा फेरि एकता केन्द्र छुट्टिएर दुई चिरा परेपछि प्रचण्ड समूह तत्कालीन नेकपा माओवादीका रुपमा देखा प¥यो र एक वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह सुरू ग¥यो । वि.सं. २०६४ पछि देशकै ठूलो पार्टीका रुपमा एकीकृत भएको माओवादी केही वर्षमा नै फेरि टुक्रिन पुग्यो । अझैसम्म पार्टी निर्विवाद रुपमा एकढिक्का हुन सकेको छैन ।
प्रचण्डको राजनीतिक जीवनलाई अध्ययन गर्दा टुटफूट, आरोह, अवरोह, पश्चात्ताप, धोकाले रंगिएको देखिन्छ । अबको नया“ समय र परिस्थितिमा एमाओवादीलाई नया“ ढंगले रुपान्तरण गरेर जनचाहना र विश्वासअनुसार संविधानसभामा प्रस्तुत नगरेमा उनको राजनीतिक भविष्य झनै संकुचित बन्न जानेछ । विगतका गल्ती, कमजोरीहरुबाट सिकेर फेरि पश्चात्ताप गर्न नपर्ने गरी पार्टी नेतृत्व सम्हालेमा प्रचण्डबाट देशले धेरै कुराको आशा गर्न सक्नेछ र उनको राजनीतिक छवि फेरि चम्किनेमा कुनै शंका छैन ।
देश बचाउन नागरिकको दायित्व महत्त्वपूर्ण
अध्ययनको आनन्द ! [लक्ष्मणरेखा]